https://refu-tips.de/en/my-friend-told-me-that-he-ejaculated-what-does-that-mean/ – Tips for refugees
Manidu waa biyo dheecaan adag.
Dheecaankan wuxuu ka yimaadaa xubinka taranka ninmka.
Midaana waxay dhacdaan marka uu ninku siigaysto.
Maqaalkan wuxuu kuu sheegayaa waxa uu yahay siigaysigu
Haddii aad liqdid manida ma noqonaysid qof midaasi uur ku qaada.
Laakiin manidu waxay sidi kartaa cuduro.
Xitaa marka manida la liqo.
Haddii aadan hubin in wiilka saaxiibkaaga ahi uu yahay mid caafimaadkiisu fiicanyahay, waxaa wanaagsan in aadan liqin manidiisa.
Manidu qofkasta waxay ugu dhadhamaysaa si gooni ah.
Dadka qaar way jecelyihiin dhadhanka.
Dadka qaarna manidu waxay u arkaan wax lagu yaq-yaqsado.
Dhammaan wax dhib ah malahan.
Adigu khasab kuguma ahan in aad liqdid manida.
Mana jiro qof kugu khasbi kara in aad liqdid manida.
Xitaa wiilka saaxiibkaaga ah.
Previous Previous post: Anigu waxaan ahay wiil 16-sanno jir ah waxaana isticmaalaa kursiga curyaanka. Waxaan jeclahay in aan banaanka la baxo saaxiibadayda. Waxay igu dhahaan in aanan samayn karin wax galmo ah. Maadaama aan ahay qof ku socda kursiga curyaanka. Waxay dhahaan in aan anigu ahayn nin dabiici ah. Anigu ma hubi arintaasi. Run miyaa midaasi?
Next Next post: Anigu waxaan ahay gabar 17-sanno jir ah waxaana jeclahay in aan maalin noqdo hooyo. Laakiin qoyskaygu midaasi ma doonayaan. Waxaa igu adag in aan wax cusub barto. Sidaas darteeda waa in aanan hooyo noqonin. Waxaan u malaynaa midaasi in ay tahay mid aanan cadaalad ahayn. Miyay tahay in aanan noqonin hooyo marka aan weynaado?